Na nke ugbu a afọ nkà na ụzụ progression, ịmafe ngwaọrụ inweta ihe kasị nke ọhụrụ na-akpali akpali atụmatụ aghọwo a kama nkịtị na-emekarị. Aghọwo ndị ọzọ tech maara na ọ bụ onye ọ bụla praịm nchegbu na aka na gadget na a kwadebere n'ụzọ na naanị nnọọ ọhụrụ oru akụrụngwa.
Ngwaọrụ ịmafe nwere ike na-akpali akpali ma fọrọ nke nta niile nke ọrụ chọrọ na-data ha gara aga ngwaọrụ nchebe. Nke a bụ nanị na-agwụ ike ma na-enyetụ cumbersome usoro abuana ke ngwaọrụ ịmafe. Ọ bụrụ na ị na-achọ nyefee data si a Nokia ka a Blackberry ngwaọrụ, isiokwu a ga-eduzi gị otú ị. Ọ na atụmatụ abụọ free ụzọ ka ịgbanwee data si Nokia ka blackberry juputara na-atụle uru na ọghọm nke ọ bụla.
Nyefee Data si Nokia ka Blackberry Iji aka
Nyefee gị data aka si a Nokia ka a blackberry, ị 'ga-achọ:
A laptọọpụ ma ọ bụ kọmputa
Iji nyefee Pictures, Music na Videos
1. Iji USB cables, jikọọ ekwentị Nokia gị na gị Blackberry ekwentị na kọmputa ma ọ bụ na laptọọpụ.
2. Site File Explorer, chọta gị Nokia ekwentị na abụọ click na ya na-ele ọdịnaya.
3. Chọpụta nchekwa aha ya bụ "Pictures" na abụọ Pịa ele na ya.
4. Pịa Ctrl + a iji họrọ ihe osise nile dị na nchekwa ma ọ bụ họrọ onye photos site na ịpị ha mgbe ejide ala Mgbanwe isi.
5. Mgbe ị na-mere-ahọpụta, nri pịa ma site na menu na emepe họrọ "Copy" ma ọ bụ Nhọrọ pịa Ctrl + c.
6. Ugbu a n'iji File Ịnyocha, chọta gị blackberry na ekwentị na-emeghe ya ọdịnaya. Chọpụta nchekwa kpọrọ "Pictures" ma ọ bụ ma ọ bụrụ na ọ dịghị onye na-ama, mee ka otu onye. Iji mee ka a ọhụrụ nchekwa nri pịa ma site na menu na-emepe anyị gaa New nchekwa.
7. aha nchekwa dị ka foto, na-emeghe ya site abụọ na ịpị na ya wee pịa Ctrl + v ka mado ihe osise nile dị na ị dị nnọọ depụtaghachiri si gị ochie Nokia ekwentị.
8. Iji otu usoro i nwere ike nyefee music na vidiyo si gị Nokia ka Blackberry.
Iji nyefee Ndi ana-akpo
Ọ bụrụ na gị Nokia ngwaọrụ nwere a Google akaụntụ ahazi na ya na i nwere niile kọntaktị gị synced na Google akaụntụ karịa gị na mkpa ime otu ihe. Nanị abanye na gị Blackberry ngwaọrụ site na iji otu Google na akaụntụ, na ndị niile gị na kọntaktị ga-synced gị Blackberry ngwaọrụ.
All kọntaktị gị ga-agafere gị blackberry na ngwaọrụ ma ga-egosipụta na ya.
Uru: dịtụ mfe, na-achọ naanị ihe ọmụma bụ isi nke akwụkwọ / pasting ihe
Cons: dịghị ụzọ nyefee memos ma ọ bụ kalenda, onye ọ bụla ihe nwere na-depụtaghachiri n'otu n'otu
Nyefee Data si Nokia ka Blackberry site ndabere
Iji usoro a, ị na-adịghị na n'otu n'otu idetuo / mado data. Ọ na-achọ na ị mbụ ndabere ekwentị Nokia gị na mgbe ahụ iji na ndabere, weghachi gị Blackberry ekwentị. Ya mere usoro n'ozuzu nwere ihe abụọ nzọụkwụ:
Akwado ihe Nokia Ngwaọrụ
Iweghachi blackberry ngwaọrụ eji na nkwado ndabere na mpaghara
Ka anya na ndị a nzọụkwụ abụọ otu otu:
Ndabere gị Nokia ekwentị gị, mkpa na Nokia PC Suite gị na kọmputa. Nokia PC Suite bụ a free software nyere site Nokia onwe ya na nwere ike ibudata site http://www.microsoft.com/en-pk/mobile/support/product/nokia-pc-suite/. Ozugbo ị ibudatara na arụnyere Nokia PC Suite gị na kọmputa, eso ndị a:
1. Launch Nokia PC Suite na jikọọ ekwentị Nokia gị ka laptọọpụ ma ọ bụ na kọmputa site na eriri USB. Họrọ akara ngosi na n'elu nri akuku nke menu (encircled na red).
2. Nokia ọdịnaya copier ga ẹkedori na ị ga-jụrụ iji họrọ ekwentị na ị na-achọ ka ndabere. Họrọ nhọrọ na-ekwu "ndabere chọrọ ekwentị ọdịnaya ka a ndabere faịlụ nke na echekwara ya na PC".
3. A ákwà ga-apụta na-arịọ gị iji họrọ data ihe na-ịchọrọ ị ndabere. Ego ma ọ bụ uncheck ihe dị ka kwa gị chọrọ na pịa-atụ akụ na ala nke ihuenyo.
4. The ndabere usoro ga ịbụ n'oge na-adịghị na a na-enwe ọganihu mmanya nke ike-eji soro ọganihu nke usoro. Chere maka usoro iji wuchaa ma jide n'aka na ekwentị adịghị detached mgbe usoro bụ ka underway.
Iji weghachite data si ndabere faịlụ na ị dị nnọọ kere, ị ga-achọ Blackberry Desktọpụ software. Ọ bụ ihe na ukara Blackberry ịba uru omume na dị free nke na-eri na http://us.blackberry.com/software/desktop. Download na wụnye Blackberry Desktọpụ software gị laptọọpụ ma ọ bụ na kọmputa na gaba dị ka eduzi n'okpuru:
1. Jikọọ gị Blackberry ngwaọrụ gị laptọọpụ ma ọ bụ kọmputa na ẹkedori Blackberry Desktọpụ software. Gaa Device Weghachi.
2. Site na ihuenyo na emepe, chọta nkwado ndabere na mpaghara faịlụ gị Nokia ekwentị wee họrọ data na ị chọrọ iji weghachi site ịlele ma ọ bụ unchecking chọrọ data ihe. Pịa "Weghachi" mgbe ị na-eme.
3. Mgbe Iweghachi usoro bụ zuru ezu, ị ga-enwe niile nke data gị Nokia dị na gị Blackberry ngwaọrụ.
Naghachi My Photos Free
> Resource> Free> Free Ụzọ ka ịgbanwee Data si Nokia ka Blackberry